दलाललको इसारामा चल्छन् यातायात कार्यालयका कर्मचारी ! सीमा क्षेत्रमा नक्कली डाक्टरको बिगबिगी (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३२५ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न रिपोर्टहरु
१० वर्षीया आफ्नै छोरीलाई बलात्कर गर्ने बुबा जेलमा, राजदुत लक्की शेर्पाबारे थप खुलासा (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३२४ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न रिपोर्टहरु
निर्वाधरुपमा आवातजावत गर्न पाउने एम्बुलेन्सहरु त्रिनगर भन्सारमा रोकिन्छन् ! (भिडियो)
१. नाकामा एम्बुलेन्स कैलाली । एम्बुलेन्स जस्तो मानवीय संवेदनासंग जोडिएको सवारी साधन निर्वाधरुपमा जहाँ पनि आवतजावत गर्न पाउने प्रावधान छ । तर कैेलालीको त्रिनगरस्थित भन्सारले एम्बुलेन्सको स्वतन्त्र आवतजावतमा रोक लगाउँदै
आफ्नै विषयमा रविको स्पष्टोत्ति, बमजन आश्रममा प्रहरी-भेटिए नुनका खाली प्याकेट ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३२३ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३२१ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । आजको एपिसोडमा निम्न विशेष
वीपीको मेलमिलाप नीतिले यो देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगायोः कांग्रेस नेता केबी गुरुङ
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस भित्र त्यागी र समर्पित नेताको छबि बनाउनु भएका कुलबहादुर गुरुङ अर्थात केबी गुरुङ वीपी कोइरालाको मेलमिलापको नीतिलाई नजिकबाट जान्ने नेता पनि मानिनु हुन्छ । वीपी मेलमिलापको
यौन हिसांको आरोप लागेका रामबहादुर बम्जनमाथि प्रहरीले छानबिन गर्ने, विद्यार्थी नेता कारवाहीमा ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ नेपाल टेलिभिजनको विशेष कार्यक्र ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३२० औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ, भने बलात्कार र मानिस
सिंहदरबारमा करोडौं सम्पत्तिको दुरुपयोग , मन्त्रीदेखि कर्मचारीको लापरबाही (भिडियाे)
काठमाडौँ । मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नयाँ नयाँ गाडी चढ्न पाए पुग्छ । कर्मचारी पनि नयाँ गाडी किन्दा कमिशन आउने भएकाले यसको खेलमा छन् । सिंहदरबारभित्र हरेक मन्त्रालय अगाडी ६/७ वटा गाडी
नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर एउटै व्यक्तिले सय महिलालाई सताए, हटेन सिन्डिकेट-यात्रु मारमा (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३१७ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । आजको एपिसोडमा निम्न विशेष रिपोर्टहरु